February 6, 2020 - CeleLove
တစ်ပတ်စာ(၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း (7.2.2020 မှ 13.2.2020 အထိ)
February 6, 2020 CeleLove 0
တစ်ပတ်စာ(၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း (7.2.2020 မှ 13.2.2020 အထိ) “တနင်္ဂနွေ” ဘာပဲလုပ်လုပ် ပင်ပန်းမှုတွေ ယှဉ်တွဲနေမယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့၊ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုတွေကြောင့် အခွင့်အရေးကောင်းတွေ တွေ့ကြုံလာမယ်။ ငွေကြေးကံကောင်းမွန်နေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေ အရာထင်မယ့်ကာလပါ။ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့် တိုးတတ်မှုတွေ တွေ့ကြုံပေမယ့် လူမှုရေးအနှောက်အယှက်တွေ တွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စ၊ ဘာသာရေး […]
လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့… (ရုပ်သံ)
လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့… (ရုပ်သံ) လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ရုပ်သံ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် …။ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ချနေကြတာပါ …။ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားတွေအကြားပါ …။ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ချနေကြတာပါ …။ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ […]
🔺🔺 အရေးကြီးသတင်း 🔺🔺 တရုတ်နိုင်ငံသား ငါးဦးသည် (ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသူ) မိမိတို့ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည်
🔺🔺 အရေးကြီးသတင်း 🔺🔺 တရုတ်နိုင်ငံသား ငါးဦးသည် (ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသူ) မိမိတို့ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည် ( ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တွင်ရှိသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ) အောက်ဖော်ပြပါ စာနှင့်ဓာတ်ပုံများသည် ရွှေလီ(တရုတ်ပိုင်)ရဲဌာနမှ တရားဝင် အကြောင်းကြားလာသည့် official latter စာဖြစ်ပါသည် … ။ ၎င်းတို့ တရုတ်နိုင်ငံသား […]
တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့ (ရုပ်သံ)
တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့ (ရုပ်သံ) တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့ …. “တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့” ကျောက်စုတ်စက်လှေတွေကြောင့် စိုက်ခင်းတွေ […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့ မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာ ငွေကြေးချမ်းသာမှု မဟုတ်ပါ ဘူး … ။ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သူရယ်ပါ မိန်းကလေးဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်သူတွေပါ … ။ အဆင်မပြေချိန် စိတ်အားငယ်ရချိန်တွေမှာ သူတို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာ […]
အမြင်အာရုံကြည်လင်စေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးသင့်တဲ့ မျက်လုံးအနားပေးလေ့ကျင့်ခန်း (၁၁)မျိုး….
အမြင်အာရုံကြည်လင်စေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးသင့်တဲ့ မျက်လုံးအနားပေးလေ့ကျင့်ခန်း (၁၁)မျိုး…. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မျက်လုံးကို အသုံးပြုရတာ အရမ်းများပါတယ်။ စာဖတ်တာ၊ ကွန်ပျူတာကြည့်တာနဲ့ ဖုန်းကြည့်တာကတော့ တစ်နေကုန်၊ မအိပ်မချင်းပဲလို့ တောင်ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မျက်လုံးကို အဲ့ဒီလိုဆက်တိုက်အသုံးပြုပေမယ့် မျက်လုံးကျန်းမာဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်တာမျိုး၊ မျက်လုံးကို ဂရုစိုက်တာမျိုးတော့ မလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး … ။ […]
ဒါကြောင့် တန င်္လာ သား သမီးတွေ ကိုအချစ်ကြီးသူတွေ လို့ ပြောကြတာ စိတ်တော့နာအောင်သွား မလုပ်လေနဲ့ – တနင်္လာ သားသမီးတွေလား တည်ငြိမ်တယ်ထင်ရတယ်။ – စိတ်က ခလေးစိတ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာအရမ်းလွယ်တယ် ။ – နည်းနည်းလေးဆို မျက်ရည်လေးကဝဲတက်လာတယ်။ – ဟန်မဆောင်တတ်ဘူး […]
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အပြင်က မြေးအဖိုး နှစ်ယောက်ဘဝ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အပြင်က မြေးအဖိုး နှစ်ယောက်ဘဝ သြော် လူ့တချို့ ဘဝတွေကလဲ ခါးလိုက်တာနော်။ လူ့လောကကို မရောက်လာခင်က အမေဗိုက်ထဲ နေခဲ့ရပေမဲ့ တကယ်တမ်း လူ့လောကကို ရောက်လာတော့ အမေနို့တောင်မစို့ရဘူး။ အဘိုးဖစ်သူနဲ့ နေနေရတာ။ အဘိုးက ဝန်းထမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပင်မဲ့ အငြိမ်းစား ယူသွားရတော့ မြေးကို စောင့်ရှောက်နေရတာ […]
ဓမ္မတာလာစဉ် သွေးခဲတွေဆင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း (၅) ချက် အမျိုးသမီးတိုင်း လစဉ်ဓမ္မတာလာစဉ်မှာ တစ်လနဲ့တစ်လ အခြေအနေတွေ မတူညီပါဘူး။ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ပမာဏ နည်းတာ၊ များတာ၊ သွေးအရောင် ရင့်တာ၊ သွေးခဲတာ စသဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာလာစဉ်မှာ သွေးခဲတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကို သိချင်နေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် […]
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့သော် …
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့သော် … ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+ (နာမည်မှာ ”M” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျို့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ …။ (အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး) သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တတ်တယ် …။ (ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ […]